मधुमेहका रोगीले कस्तो फल सेवन गर्ने ? अवश्य जान्नुहोस् | Khabar Express Tv
मधुमेहका रोगीले कस्तो फल सेवन गर्ने ? अवश्य जान्नुहोस्
खबर एक्सप्रेस २०७७-०८-२८ ०५:०३ मा प्रकाशित Total Shares: 217
काठमाडौं - मधुमेहमा सुगर नियन्त्रण गर्न एकदमै जरुरी हुन्छ । यद्यपि शरीरमा ब्लड सुगर बढ्नु र घट्नुमा अरु केही कारण हुन्छन् । जस्तो, तपाईंलाई टाइप २ डाइबिटिज छ भने तपाईंको इन्सुलिन सही ढंगले सुगर पच्न पाइरहेको हुँदैन । तब यो सुगर सोझै तपाईंको रगतमा पुग्छ र ब्लड सुगरको मात्रा बढ्छ ।
यसैगरी मोटोपन, हाई कब्र्स, हाई कोलेस्टोर, अस्वस्थ्य बोसोयुक्त खानेकुराले पनि तपाईंको शरीरमा ब्लड सुगरको मात्रा बढाइदिन्छ । यसरी विविध कारणले शरीरमा ब्लड सुगरको मात्रा बढ्ने भएकाले त्यसका सम्बन्धमा विभिन्न भ्रम एवं दुविधा रहेको पाइन्छ । खासगरी फलफूलको सेवनलाई लिएर मधुमेह रोगीहरु स्पष्ट हुँदैनन्, कस्तो फल खाने वा कस्तो नखाने ? कति खाने, कसरी खाने ?
मधुमेह भएका अवस्थामा आँप, केरा, सीताफल, र अंगुर जस्ता फल खान हुन्न । किनभने यी फलहरुमा चिनीको मात्रा अत्याधिक हुन्छ । चिकित्सकहरुले यी फलहरु मधुमेहका रोगीलाई नखान सुझाव दिने गरेका छन् ।
मधुमेहका रोगीले केरा खान हुन्छ कि हुन्न त ? केरामा एक उच्च ग्लाइसेमिक सुचकांक हुन्छ, जसको अर्थ यसमा चिनीको मात्रा बढी र फाइबर कम हुन्छ । यसमा रहेको चिनीले पनि मधुमेह रोगीलाई राम्रो गर्दैन । यद्यपि तपाईंले केरालाई सही मात्रामा र सीमित मात्रामा सेवन गर्ने हो भने, यसले त्यती हानी पनि गर्दैन ।
मधुमेहमा कस्तो फल उपयुक्त हुन्छ त ? विशेषज्ञका अनुसार सुन्तला निकै फाइदाजक हुन्छ । सुन्तला मधुमेह रोगीका लागि सुन्तला एक सुपरफूड हो । यद्यपि सुन्तलाको जुस भने उचित हुँदैन । यसमा अतिरिक्त चिनी मिसाइएको हुन्छ । यद्यपि ताजा सुन्तला सेवन गर्ने हो भने यसमा फाइबर, भिटामिन सि, फोलेत र पोटासियम आदि पाइन्छ, जसले ब्लड सुगरको मात्रा नियन्त्रण गर्छ ।
अम्बा पनि मधुमेह रोगीका लागि निकै उपयुक्त फलमध्येमा पर्छ । यसमा लो ग्लाइकोमिक इन्डेक्स हुने भएकाले मधुमेह नियन्त्रणमा सहयोग गर्छ । यो फाइबरको समृद्ध स्रोत पनि हो । यसमा भिटामिन ए र सि अधिक पाइन्छ, जो मधुमेह रोगीका लागि उचित हुन्छ ।
नास्पतीमा २८ प्रतिशत चिनी हुन्छ । यसमा महत्वपूर्ण मात्रामा भिटामिन सि, थायमिन, पोटाशियम, म्याग्नेसियम र फाइबर हुन्छ । चिनीको मात्रा बढी भएपनि नास्पती निकै फाइदाजक हुन्छ । मौसममा भिटामिन सिको मात्रा बढी हुन्छ । यसमा चिनीको मात्रा धेरै हुँदैन । मधुमेह रोगीका लागि यो फल पनि निकै उपयोगी हुन्छ ।